Ndị na-ere ngwaahịa na ụlọ ọrụ - Ndị na-emepụta ụmụ nwanyị China
Ldies ejiri mee suede Merino sheepskin gloves with fox fur cuff
Emere site na 100% ezigbo lambskin nke merino, ndị a dị oke nro. Ihe okike a na-ekpo ọkụ ma na-eku ume. E ji ụzọ atọ rụọ ọrụ aka. Jiri nlezianya họrọ ajị anụ kacha mma dị ka akwa. Mma na ntụsara ahụ! Ndị omenkà nwere aka karịa afọ iri nwere aka. Mee ka aka gị kpoo ọkụ n’oge oyi a na ngwa ngwa.
Mụ nwanyị nyere Merino atụrụ na-akpacha ajị atụrụ
Mere nke ezi ihu abụọ na-akpacha ajị atụrụ nke merino, ndị a dị oke nro. Atụrụ atụrụ na-ekpo ọkụ ma na-adịgide adịgide ma akwa ụrọ eke na-eme ka mittens ndị a na-eku ume. Ha ga-eme ka aka gị kpoo ọkụ na ụbọchị kachasị oyi All Handsewn craft. zuru oke maka iji ihu igwe na oyi eme ihe kwa ụbọchị.
Ejiri akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ Napa nke ejiri aka mee nke nwere njirimara ejiri aka mee
Mere nke naanị merino napa atụrụ, Shearling Atụrụ na Napa Akpụkpọ anụ. durable napa akpụkpọ anụ na-emecha ajị anụ ajị anụ na-adị ọcha. Oge gboo na ụmụ nwanyị okomoko uwe aka mara mma nke ọma. Chepụta otu aka nke inye aka na azụ, ịma mma na nkecha ma dakọtara ajị ajị anụ.
Ejiri aka ejiri aka mee okpukpu abuo na-acho acho
Mere nke naanị merino akpụkpọ anụ, Shearling otu n'ime ụwa kachasị mma ajị ajị atụrụ. Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ na-adị nro ma na-enwu gbaa, na-eju anya ma na-adịgide adịgide. Ji na-emeghe ọgwụgwụ cuff, ekwekọghị na otu hide eriri mmechi. Lee anya n'okike na ịma mma, Ihe niile dabara adaba .Ọ dị mma maka akwa akwa ihu igwe!